Akanakisa Mapurogiramu eDzidzo Yakakosha paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Akanakisa Mapurogiramu eakakosha Dzidzo paLinux
Dzidzo ndiyo inonyanya kukosha. Zvinonyadzisa kuti hurumende zhinji dzinoshandisa chikamu chedzidzo kudzidzisa kana kusaiziva zvachose. Kudzidziswa hakuna kukosha chete kuti uwane basa, zvakare zvakakosha kune hupenyu hwezuva nezuva, kudzivirira kubata, uye kunyangwe kuve nenyika yakatwasuka uye yakabudirira.
Kana iwe uine vana kumba, kana nzvimbo yekudzidzisa, unogona kuva neakawanda e maturusi akakosha edzidzo pane GNU / Linux distro. Uye zvakare, haufanire kubhadhara marezinesi, sekune software yekudyara, kugona kuishandisa kunyangwe munyika dzisina zviwanikwa zvakawanda. Heino runyorwa rwemamwe akanakisa ekudzidzisa maapp ...
1 KDE Education Suite
3.1 Celestia / Stellarium
KDE Education Suite
KDE Education Suite Iyo inonakidza KDE package (yeuka kuti inogona kuiswa mune dzimwe nharaunda, inongoda kugutsa kutsamira kwemaraibhurari) yedzidzo yevana vadiki. Uye zvakare, inogona zvakare kubatsira kune vadzidzisi vepuraimari vanoda zvemahara, zviri nyore, uye zvinokurumidza maturusi.
Imwe nzira yekudzidza kweLinux chirongwa ichi GeoGebra. Chikamu chemasvomhu chematanho ese edzidzo. Inosanganisira zvidzidzo zvakaita sejometri, algebra, pfungwa, manhamba, Calculator, mifananidzo, nezvimwe.
Iyo yakakurumbira show Google Kuona pasi rakanakira kudzidzisa zvidzidzo senge jogirafi uye geology. Nzira yekufamba famba uchitenderera pasirese zvakabatana uye kunyangwe nemaonero e3D uye mamwe marudzi emepu anogona kugadziridzwa. Nenzira iyi makirasi anozonyanya kunakidza.
Kana izvo zvauri kutsvaga chishandiso chekudzidza izvo zviri mhiri kwepasi, senge zvakasikwa, nyeredzi, nemamwe mapuranetiIwe unogona zvakare kushandisa aya maviri makuru mapurogiramu anowanikwa kuLinux.
GCompris chirongwa chedzidzo yevana vari pakati pemakore maviri kusvika gumi ekuberekwa. Iyo ine dzakasiyana siyana, senge mitambo yemavhidhiyo kukwidziridza kudzidza, mashandiro ekudzidzira kuverenga, zvinyorwa, kutanga sainzi yemakomputa, mitambo yekurangarira, nezvimwe
sage imwe yeaya mapurogiramu edzidzo, kunyanya nematambudziko esvomhu. Iyo inobuda senzira yemahara yezvirongwa zvakaita MAPLE kana Magma. Kubva paPython uye yakavakirwa pamusoro pemamwe mapakeji senge NymPy, SciPy, matplotlib, Sympy, Maxima, GAP, FLINT, nezvimwe.
Vashandisi veRaspberry Pi vangangodaro vatoziva nezvayo. Iyi Anwendung yakakwana kugadzirisa fungidziro nekusika kwevadiki. Scratch inokutendera kuti iwe ugadzire yakapusa mitambo yemavhidhiyo, mifananidzo, ita inofambidzana nyaya, nezvimwe. Kugadzikana kukuru kunoita kuti ive shamwari yakanaka yemakirasi.
Tux4Kids ndeimwe suite yedzidzo yeLinux iyo inobatsira nemathematics, komputa, kudhirowa uye kugadzirisa mapuzzle, pakati pevamwe. Pasina kupokana, chirongwa chinosanganisira akati wandei zvinonakidza zvirongwa zvevadiki.
Kuti udzidze Chirungu iwe unogona zvakare kutarisira kune yakawanda zviwanikwa zviripo. Kubva padandemutande rewebhu deepl.com, kunyange zvishandiso zve Shandurudzo google kuteerera kududziro, duramazwi repamhepo Mazwi, chikuva Linguee kuona muenzaniso shanduro, kana maapplication senge Anky yaunoshanda nayo nemadhigadhi emazwi ekuti ubate nemusoro zvirinani ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Akanakisa Mapurogiramu eakakosha Dzidzo paLinux
Chrome 92 inosvika ine makumi matatu neshanu ekugadzirisa uye zviito zvinokurumidza